युसेन बोल्ट - विकिपिडिया
युसेन बोल्ट, ओजे, सीडी
२०१३ को विश्व च्याम्पियनसिप एथलेटिक्स प्रतियोगितामा बोल्ट
सन् १९८६ अगस्त २१
शेरवुड कन्टेन्ट, ट्रेलाव्नी पारिस,जमैका
६ फिट ५ इन्च (१९६ सेमी)
९४ किग्रा (२०७ पाउन्ड)
ट्रयाक तथा फिल्ड
रेसर ट्रयाक क्लब
उपलब्धि र उपाधिहरू
१०० मी: ९.५८ विश्वरेकर्ड (बर्लिन २००९)
१५० मी: १४.३५ विश्वउत्कृष्ट (म्यानचेस्टर २००९)
२०० मी: १९.१९ विश्वरेकर्ड (बर्लिन २००९)
३०० मी: ३०.९७ (ओस्ट्राभा २०१०)
४०० मी: ४५.२८ (किङ्सटन २००७)
६ ० ०
८ २ ०
१६ २ ०
२००८ बेइजिङ १०० मी
२००८ बेइजिङ २०० मी
२००८ बेइजिङ ४×१०० मी रिले
२०१२ लण्डन १०० मी
२०१२ लण्डन २०० मी
२०१२ लण्डन ४×१०० मी रिले
२००९ बर्लिन १०० मी
२००९ बर्लिन २०० मी
२००९ बर्लिन ४×१०० मी रिले
२०११ देगु २०० मी
२०११ देगु ४×१०० मी रिले
२०१३ मस्को १०० मी
२०१३ मस्को २०० मी
२०१३ मस्को ४×१०० मी रिले
२००७ ओसाका २०० मी
२००७ ओसाका ४×१०० मी रिले
२००५ नस्साउ २०० मी
२०१४ ग्लासगो ४×१०० मी रिले
प्रतिनिधित्व अमेरिकाको लागि
२००६ एथेन्स २०० मी
सेन्ट लियो युसेन बोल्ट को जन्म २१ अगस्त १९८६ मा जमैकामा भएको हो । उनी जमैकाको धावक हुन् र तीन पटक ओलम्पिक खेलमा स्वर्ण पदक विजेता हुन् । उनी १०० मिटर, २०० मिटर र आफ्नो टिमका साथीहरु सँग मिलेर ४x१०० मिटर रिले दौडको विश्वरेकर्ड बनाएका छन् । यी सबै तीन विधाका दौड प्रतियोगितामा उनले ओलम्पिक रेकर्ड पनि आफ्नो नाममा राखेका छन् । सन् १९८४ मा कार्ल लुईस पछि २००८ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलमा एउटै ओलम्पिक खेलको तीन दौड विधामा विश्व रेकर्ड बनाउने पहिलो व्यक्ति पनि बनेका छन् ।
१.१ व्यक्तिगत उत्कृष्ट प्रदर्शन
व्यक्तिगत उत्कृष्ट प्रदर्शन[सम्पादन गर्ने]
१०० मिटर ९.५८ बर्लिन,जर्मनी १६ अगस्त २००९ ९.६३ सेकेन्डको आफ्नो रेकर्डमा सुधार गरेका थिए ।
१५० मिटर १४.३५ म्यानचेस्टर, संयुक्त अधिराज्य १७ मे २००९ विश्व उत्कृष्ट उनले १०० मी को दुरी ८.७० सेकेन्डमा पार गरेका थिए । यो १०० मी दुरी पार गर्ने विश्व रेकर्ड रहेको थियो । यस दौडको औसत गति ४१.३८ किमी/घंटा (२५.७१ माइल/घंटा).
२०० मिटर १९.१९ बर्लिन,जर्मनी २० अगस्त २००९ बिश्व रेकर्ड संगै ओलम्पिक रेकर्ड पनि बनाए ।
३०० मिटर ३०.९७ ओस्ट्राभा, चेक गणतन्त्र २७ मे २०१० यो दोश्रो सबैभन्दा तिब्र समय थियो । यो भन्दा पहिले माइकल जनसनद्वारा ३०.८५ समयमा यो दुरी पार गरेका थिए । यो प्रतियोगितालाई आइआइएएफले मान्यता दिइएको छैन ।
४०० मिटर ४५.२८ किङ्सटन, जमैका ५ मे २००७
४ × १०० मिटर रिले ३६.८४ लण्डन,इंग्ल्याण्ड ११ अगस्त २०१२ साझा गरेका थिए योहान ब्लेक, माइकल फ्राटेर तथा नेस्टा कार्टर.
↑ "Usain Bolt", sports-reference.com, Sports Reference LLC, अन्तिम पहुँच १७ जनवरी २०१४।
↑ "Biography", अन्तिम पहुँच २८ नोभेम्बर २०१३।
↑ Usain Bolt beats Gay and sets new Record – from Universal Sports युट्युबमा हेर्नुहोस्
↑ New World Best over 150m for Usain Bolt from Universal Sports युट्युबमा हेर्नुहोस्
↑ New World Record over 200m for Usain Bolt – from Universal Sports युट्युबमा हेर्नुहोस्
विकिमिडिया कमन्समा युसेन बोल्ट सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=युसेन_बोल्ट&oldid=985082" बाट अनुप्रेषित